नाजिरको कमेडी, कर्माको रोमान्समा यस्तो पो आयो ‘गरुड पुराण’को ट्रेलर - Online sakharapur
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/नाजिरको कमेडी, कर्माको रोमान्समा यस्तो पो आयो ‘गरुड पुराण’को ट्रेलर
नाजिरको कमेडी, कर्माको रोमान्समा यस्तो पो आयो ‘गरुड पुराण’को ट्रेलर
काठमाडौँ। चलचित्र ‘गरुड पुराण’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। हाइलाइट्स् नेपालको युट्युब च्यानल,मार्फत चलचित्रको ट्रेलर सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो। केही समय अगाडि चलचित्रको ‘म त पिरिममा’ बोलकोगीत सार्वजनिक भएको थियो जुन निकै चर्चित भएको थियो।
सुवास कोइराला र सुशन प्रजापतिले निर्देशन गरेको यो चलचित्रमा कर्मा शाक्य, प्रवीण खतिवडा, प्रियङ्का सिंह ठकुरी, कामेश्वर चौरासिया, नाजिर हुसेन, लुनिभा तुलाधर, प्रकाश घिमिरे, वसन्त भट्ट लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ । प्रियङ्का यसै चलचित्रमार्फत नेपाली रजतपटमा नायिकाको रूपमा डेब्यु गर्दैछिन् ।
आकाश बराल, बिनोल खतिवडा र सुवास आफैँले लेखेको यो फिल्मको कथा कसम नेपालको हो । निर्माताको रूपमा अजित प्रजापति र अशोक गौतम रहेका छन् । सुसन प्रजापतिको छायाङ्कन रहेको फिल्मलाई उज्ज्वल ढकालले सम्पादन गरेका छन्।
स्कुटीमा बच्चासहित सवार महिलाको गहना यसरि लुटियो, सिसिटिभिमा कैद भयो दृश्य
चितवनमा भेटिए- सँसारमै नभएको अनौठो मान्छे ! पुलिसले किन समातेर हत्कडी लगायो ?
माइनस ६१ डिग्री सेल्सियस तापक्रम पुग्ने सहर, त्यहाँ मानिसहरु किन बस्छन् ? (भिडियो)
शिल्पामाथि पत्रकारको हमला: शिल्पाले रेखामाथि पनि लगाए यस्तो आरोप (भिडियो)